Foto na vidiyo: Oké mmiri ozuzo na-akpata ọdachi na Spain | Netwọk Mgbasa Ozi
Monica sanchez | | Idei mmiri
Totana (Murcia). Foto - Totana.es
Nyaahụ bụ ụbọchị anyị na-agaghị echefu echefu. Mmiri ozuzo karịrị 120l / m2 ahapụwo ọtụtụ n'okporo ámá n'akụkụ ndịda ọwụwa anyanwụ nke peninshula na agwaetiti Balearic kpamkpam idei mmiri. Ma, ọ bụghị naanị mmiri ghọrọ nsogbu, yana ikuku.
E nwere oge gusts kachasị ike gwụrụ karịa 70km / h, nke gbakwunyere oké mmiri ozuzo, mere ka ihe ga-abụ nanị Sọnde igwe ojii, bụrụ ụbọchị Sọnde nke ọtụtụ n'ime anyị ga-ewere mop iji wepụ mmiri batara n'ụlọ ahụ. Ndị a bụ vidiyo na foto kachasị mma nke oge mmiri ozuzo a hapụrụ anyị.
1 Gịnị kpatara oké ifufe a?
3 Foto na vidiyo
Gịnị kpatara oké ifufe a?
Ọnọdụ ikuku bụ:
N'ihe dị ka mita 5500 nke ịdị elu, e guzobere DANA na Disemba 17, ya bụ, ihe a maara dị ka Nzuzo Nzuzo ma ọ bụ Nwepu Obi Mwepu na ọkwa dị elu na Oke Osimiri Mediterenian, ọkachasị North Africa. Nke a pụtara na n'ogologo enwere akpa oyi karịa ikuku ikuku gbara gburugburu ma nwee nrụgide dị ala.
Na ndịda ọwụwa anyanwụ nke peninshula na na Balearic Islands anyị nwere sistemụ nrụgide dị ala nke na-adọta ikuku ikuku n'ihi ogologo ụzọ ụgbọ mmiri nke ifufe ọwụwa anyanwụ na-ebu, si otú ahụ na-akpụ ikuku nke iru mmiri nwere mmiri buru ibu ma ọ bụ, n’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, osimiri nke ikuku. Osimiri a na-aga Valencia, Murcia, ọwụwa anyanwụ Almería na Balearic Islands.
Yabụ, na-agbakwunye ihe ndị a niile, enyere ha ọnọdụ dị mma ka ha daa karịa 120l / m2 n'ime elekere ole na ole n'ihe ụfọdụ. Site na ndabere a, ndị AEMET nyere ọkwa oroma nke ka dị ike n'oge a na-ebipụta edemede a.
Na Valencian Community, Murcia na Balearic Islands, mmiri ozuzo dị egwu ma kpatara idei mmiri. Emechiela ọtụtụ ụlọ akwụkwọ taa maka enweghị ike ịnweta ha, na Murcia ihe karịrị mmadụ narị atọ na iri ise ka a napụtara n’ụgbọ ala na ụlọ. Na Almería, oke mmiri ozuzo manyere ndị Ọrụ Mberede.
Ma, na mgbakwunye na idei mmiri ahụ, ọ dị mwute na anyị ga-ekwukwa banyere onye ahụ nwụrụ anwụ. Nwa oge egbuola mmadụ atọ.
Lee foto na vidiyo nke oke ifufe ahụ hapụrụ anyị:
Okporo ụzọ juputara na mmiri na Orihuela (Alicante).
Image - Morell
Ndị ọrụ abụọ na-achọ igwu olulu n’okporo ụzọ Teniente Flomesta, nke dị na Murcia. Image - EFE
UME guzobere ntọala ya na Los Alcázares (Murcia), ebe a ga-achụpụ ọtụtụ ndị mmadụ.
Foto - Felipe García Pagán
Agbọala gwuru na Los Alcázares, otu n'ime obodo ndị ọ kacha metụta.
Los Alcázares, idei mmiri jupụtara.
Okporo ụzọ idei mmiri mere na Ses Salines (Mallorca), n'ụtụtụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Idei mmiri » FOTO NA Vidio: Oké mmiri ozuzo na-akpata ọdachi na Spain
Los Alcáceres bụ obodo dị na mpaghara Mar Menor. Osimiri Segura dị anya n’ebe ahụ. Ana m ekwu ya site na nkọwa nke foto UME.
Mbelata oriri anụ, otu n'ime igodo ọgụ megide mgbanwe ihu igwe